Home Wararka Xildhibaan Gavin Williamson oo mar kale difaacay qadiyada Somaliland
Xildhibaan Gavin Williamson oo mar kale difaacay qadiyada Somaliland
Xildhibaan Gavin Alexander Williamson ayaa mar kale difaacay qadiyada madax-banaanida Jamhuuriyadda Somaliland, ka dib hadal kas oo yeedhay Wasiirka Arrimaha Afrika ee dowladda UK.
Xildhibaan Gavin Alexander ayaa Victoria Grace Ford ku tilmaamay wasiir raad barad ku ah siyaasadda iyo arrimaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu xasuusiyey, arrinku marka uu yahay mid siyaasad samayn la xidhiidha, doorka ugu weyn in uu leeyahay Baarlamaanku, kaas oo hadda Somaliland u arka xaqiiqo aan indhaha laga qarsan karin.
“Tani waxay muujinaysaa faham la’aan buuxda oo ku saabsan xaqiiqada siyaasadeed ee ka jirta goobta. waa muhiim in wasiirada da’da yar ay dhageystaan ​​baarlamaanka maadaama ay tahay doorka baarlamaanku in uu wax ka sheego siyaasadda. Waxaanu muujiyay inuu jiro heshiis ballaadhan oo ay dawladda UK ku doonayso inay aqoonsato Somaliland” ayuu ku yidhi qoraal uu ku baahiyey barah bulshada .
Xildhibaan Gavin Alexander Williamson ayaa cay iyo aflagaado kala kulmay qaar ka mid ah madaxda dawladda taagta daran ee Soomaaliya iyo shakhsiyaad ay adeegsatay kuwaasi oo ka gam’i waayey guusha Somaliland u soo hoyatay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr Ciise Kayd ayaa sheegay in kulankani ahaa mid lagaga wada hadlayey danaha labada dal iyo iskaashiga dhinaca ganacsiga.
Previous articleCumar C/rashiid oo markale ka digay Boobka doorashada ka socota dalka
Next articleDeni “Waxa tartamaya waa aniga & Farmaajo”, Maxaa ka soo baxay kulankii Garowe?
Xiisad colaadeed oo saakay kasocta Gobolka Galgaduud
Qowmiyadda Tigreega oo ka hortimid xili kordhinta Abiy Axmad